Rivotra angovo - havaozina maitso | Green Renewables (Pejy 2)
Frantsa dia manolotra drafitra hampiakarana herinaratra avo roa heny amin'ny 2023
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny drafitra natolotr'i Frantsa hampiakatra avo roa heny ny angovo napetraka amin'ny 2023. Tianao ho fantatra ve ny fomba hanatanterahan'izy ireo izany?
Ny vidin'ny famokarana herinaratra amin'ny isa
Noho ny fihodinana ianarana, ny vidin'ny angovo azo havaozina dia nianjera mafy ary betsaka kokoa noho izay ho latsaka. IRENA dia manome antoka fa ny havaozina rehetra dia hifaninana afaka roa taona.
Ny Vondrona Eropeana dia hamela ny fanjifana tena sy ny fivarotana ny ambiny famokarana angovo tsy misy hetra manararaotra, izay mifanohitra amin'ny hetra malaza amin'ny masoandro avoakan'ny antoko malaza eto amin'ny firenentsika.
Ny vinavinan'ny angovo avy amin'ny rivotra amin'ny taona 2030 araka ny PREPA
PREPA dia nanao vinavinan'ny besinimaro momba ny hoavin'ny angovo avy amin'ny rivotra. Inona avy ireo tanjony? Inona ireo vinavinan'ny be fanantenana indrindra? Hatraiza ny herinaratra hapetraka? Inona no takian'ny PREPA? Hamboarina ve ny rafitra mifehy?
Ny angovo avy amin'ny rivotra dia mandray anjara 20% amin'ny dobo espaniola manontolo.Fomba ahoana no nivoaran'io isa io tato anatin'ny taona vitsivitsy? Ahoana no fomba fivoarany amin'ny ho avy? Tarehimarika inona no hafindra?
Mandalo orinasa Espaniola roa ny angovo avy amin'ny rivotra Japoney
Orinasa espaniola roa no nanao sonia fifanarahana hamorona SPA sy hanatanteraka tetikasa angovo mitsingevana eny ivelany izay miaraka amin'ny haitao SATH any Japon.
Ny toeram-piompiana amoron-dranomasina any Iberdrola any Wikinger dia efa mifamatotra amin'ny tondro
Iberdrola dia nanangana ny toeram-pambolena rivotra Wikinger. Aiza izany? Matanjaka iza? Ahoana no nananganana azy? Inona ireo tetik'asa hafa ananan'i Iberdrola amin'ny herin'ny rivotra any ivelany?
Ny fipoahana baomba noho ny haintany sy ny fijanonana azo havaozina
Ny fampiasana arina fandrehitra sy gazy dia nitombo noho ny tsy fahampian'ny orana sy ny tsy fisian'ny herinaratra vaovao azo havaozina Inona ny isan-jaton'ny fampiasana arina? Inona ny isan-jaton'ny fampiasana havaozina? Hitombo ve izany amin'ny ho avy? Inona avy ireo loharanom-bola ao ao amin'ny firenena?
Ny Cabildo de La palma dia hanokana 200000 € fanampiana ho an'ny fandevonan-tena
La Palma dia hampiroborobo ny fanjifana tena amin'ny mponina ao aminy. Inona ny soso-kevitrao? Io ve no Cabildo tokana manohana angovo azo havaozina? Ahoana ny hevitry ny governemanta mahaleo tena momba ny angovo madio?
Ny valan-javaboary Iberdrola (Avangrid) ho an'ny Apple dia hampiasa turbine Vestas
Iberdrola, amin'ny alàlan'ny zanany vaventy Avangrid, dia hanangana toeram-pambolena rivotra hanomezana angovo ho an'i Apple. Turbines inona no hampiasain'izy ireo? Fahefana inona no hananany? Hafiriana ny faharetan'ny fifanarahana? Orinasa iza no manao sonia an'ity karazana fifanarahana ity?
Ny fanapahana ny fanavaozana dia mety lafo be ho an'i Espana
Ny fanapahana tambin-karama azo havaozina dia mety mihoatra ny lafo amin'ny Fanjakan'i Espana. Firy ny mari-pankasitrahana miandry? Inona ny totaliny? Efa voasazy handoa ve i Espana?
Te hampitombo ny famokarana havaozina i Arzantina
Arzantina dia miloka amin'ny fanavaozana amin'ny fomba manan-danja. Inona no fepetra raisiny? Inona avy ireo angovo azo havaozina hampiasaina? Ahoana ny hevitry ny filoha Macri momba an'io?
Ny herin'ny rivotra amin'ny 2030 dia hanome herinaratra mihoatra ny 30%
Espana dia handrakotra ny fangatahana herinaratra amin'ny 30% bebe kokoa amin'ny angovo rivotra, mahatratra 40.000 megawatt ny herinaratra napetraka.
Turbinin'ny rivotra onenana amin'ny vidin'ny Smartphone
Any India, ny mpirahalahy roa dia namolavola turbin-drivotra lafo dia lafo amin'ny vidin'ny Smartphone mba hamaranana ny fahantran'ny angovo.
Aragon dia mampiroborobo ny fanavaozana amin'ny toeram-piompiana rivotra sy zavamaniry amin'ny masoandro vaovao
Toeram-pambolena rivotra marobe na fametrahana fotovoltaika amin'ny toerana ambany kokoa no atsangana ao Aragon. Aiza izy ireo? Inona no herin'izy ireo? Inona ny orinasa Aragoney manan-danja indrindra amin'ity sehatra ity? Ahoana ny fomba fampiroboroboan'ity sehatra ity ity vondron'olona mahaleo tena ity?
Ny bateria goavambe dia manarona ny delestazy aostralia atsimo
Tesla dia mametraka bateria any amin'ny fanjakan'ny South Australia mba hisorohana ny fandosirana matetika ao anaty tambajotra elektrika, ity bateria ity no lehibe indrindra manerantany ary noho ny filokana ao amin'ny twitter.
Enel dia hamokatra angovo mora indrindra eran'izao tontolo izao any Mexico
Enel dia hamokatra angovo mora indrindra eran'izao tontolo izao, indrindra ny zavamaniry any Mexico. Karazana angovo azo havaozina inona no hampiasainy? Inona no ho vidiny? Rahoviana izy io no hanomboka?
Albacete no faritany mamokatra angovo be rivotra indrindra any Espana ary ny fahatelo amin'ny fotovoltaika
Albacete dia ao amin'ny laharana voalohany amin'ny famokarana herinaratra noho ny havaozina. Inona no angovo lehibe indrindra? Inona ny valan-javaboary lehibe indrindra any Espaina ary aiza izy io? Orinasa iza no nanangana azy?
Mampidina ny tanjona famokarana azo havaozina any Bruxelles ho 27%
Ny filankevitry ny EU dia nanamafy ny tanjony andro vitsy lasa izay ny hahatratra 27% farafahakeliny ny angovo azo havaozina amin'ny fanjifana farany amin'ny 2030, raha oharina amin'ny 35% narovan'ny Parlemanta eropeana ary na ny komisiona aza.
Ny fiasan'ny milina fitotoana rivotra
Ny loharanon'ny herin'ny rivotra dia ny rivotra, fa ahoana no fomba hampiasantsika azy? Mba hanaovana izany dia ampiasaina ny mill-wind na aerogenerator.
Zava-dehibe ve ny harena ateraky ny fanavaozana azo havaozina ao amin'ny GDP any Espana?
Ny angovo maintso dia nampitombo ny fandraisany anjara tamin'ny harinkarena faobe ary nampidina ny vidin'ny tsenan'ny herinaratra. Ohatrinona ny fitomboana?
Siemens Gamesa dia mamorona turbine rivotra voalohany
Siemens sy Gamesa dia miara-miasa amin'ny famolavolana turbinina roa, ny roa lehibe indrindra noforonin'ireo orinasa.
IZAY, ny megaproject hanambatra ny angovo avy amin'ny masoandro sy ny rivotra
Ny angovo avy amin'ny masoandro sy ny rivotra dia miara-miasa mba hiterahana ny tetik'asa AREH miaraka amin'ny fametrahana herinaratra 6.000 megawatt.
Angovo azo havaozina any Amerika atsimo
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay tany Amerika Latina dia natomboka ny fanavaozana angovo maro mba hanomezana fivelarana haingana ny angovo azo havaozina.
Cepsa dia hampivelatra ny toeram-pambolen'ny rivotra voalohany ao Andalusia
Cepsa dia nanambara tamin'ny fanambarana nataony fa nahazo ny zony hananganana ny fiompiana rivotra voalohany ao Jerez de la Frontera
Ny fandrosoana farany amin'ny herin'ny rivotra
Fantatsika fa ny angovo avy amin'ny rivotra no angovo azo havaozina lehibe eto amin'izao tontolo izao, inona ny hoaviny? Inona avy ireo fandrosoany?
Fahazoan-dàlana vaovao 38 ho an'ny fiompiana rivotra ao Almería
Taorian'ny taona vitsivitsy nijanonan'ny olana, ny Junta de Andalucía dia manana tetik'asa fiompiana rivotra 38. Inona avy ireo fomba fiasa? Aiza izy ireo?
Ny toeram-piompiana rivotra mitsingevana voalohany dia efa mandeha ao amin'ny Ranomasina Avaratra
Ity toeram-piompiana fitsangantsanganana mitsingevana ity dia manana 300 MW, ahafahany manome angovo amin'ny trano 20.000 XNUMX
Firenena havaozina 100% efatra
Manararaotra ny harena voajanahariny, ny firenena sasany dia nanatanteraka ny nofinofiny hanana loharanon-karena angovo azo havaozina 2017% amin'ny taona 100. Inona avy ireo?
Mitodika any Arzantina izao tontolo izao amin'ny fampandrosoana ny havaozina
Androany dia tanterahina any Arzantina ny firenena izay kongresy Airec 2017. Firenena manana fotoana be dia be amin'ity sehatra ity. Hanao ahoana ny hoavinao?
8000 miliara amin'ny fampiasam-bola vaovao ao anatin'ny tontolo havaozina
Ny 8GW manana fahefana nomena dia mitaky fampiasam-bola mitentina € 8000 miliara. Iza ireo orinasa nahazo tombony? Ary ireo nampijaly?
Espana dia miatrika ny faran'ny fiainana mahasoa amin'ny fiompiana rivotra
Any Espana, efa ho ny antsasaky ny 23.000 MW izay apetraka eto amin'ny firenena no hihoatra ny 2025 taona ny fisiana amin'ny 20. Hanitatra ny fiainana ilaina ve izy ireo?
Rehefa afaka 3 taona dia maniry indray ny angovo azo havaozina
Ao amin'ny varotra angovo azo havaozina natao tato ho ato. maherin'ny 8 GW no nahazo loka, izay ao anatin'ny fotoana fohy dia hiteraka ny famerenana indray ny sehatra.
Ny turbine rivotra tsy misy blaogy
Mba hialana amin'ny fiantraikan'ny lelany sy hisorohana ny famoahana fako, novolavolaina ny tetikasa ho an'ny turbinin'ny rivotra tsy misy lelany.
Ny lelan'ny turbin-drivotra dia karazana fako vaovao mipoitra
Volo 4.500 eo ho eo ampiasain'ny turbinin'ny rivotra hamokarana angovo rivotra no tsy mety intsony ary tsy maintsy tsaboina ao anatin'ny 8 taona.
Ny Nosy Canary sy Azores dia hiara-miasa amin'ny raharaha havaozina
Ny Nosy Canary sy ny Azores dia nanao sonia fiaraha-miasa, fikarohana ary fifanarahana fampandrosoana ho an'ny fanavaozana. Ny Nosy Canary dia manolo-tena hanova ny maodelin'ny angovo ao aminy
Iberdrola dia nahazo ny fahazoan-dàlana rehetra amin'ny fananganana ny toeram-pambolena rivotra avy any atsinanana Anglia Telo. Izay hanana fahefana hatramin'ny 1.200 MW
Miakatra be ny fandefasana entona entona noho ny haintany
Ny tsy fahampian'ny rano amin'ireo heniheny dia nahatonga ny famoahana entona entona tao amin'ny tapany voalohan'ny taona, nandroaka 17,2 tapitrisa fanampiny ity sehatra ity.
Schiphol sy seranam-piaramanidina holandey 3 hafa dia hiasa amin'ny fanavaozana irery amin'ny taona 2018
Ny seranam-piaramanidina vondrona Schiphol (Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam ary Lelystad) dia hiasa manokana amin'ny angovo azo havaozina manomboka amin'ny 1 Janoary.
Miverina miloka amin'ny angovo azo havaozina i Espana
Taorian'ny taona vitsivitsy nahatsiravina ho an'ity sehatra ity dia toa hitan'izy ireo ny jiro tamin'ny alàlan'ny varotra 3 farany natao hanatanterahana ny tanjon'ny UE.
228 tapitrisa amin'ny Nosy Canary Fdcan no hampiasaina amin'ireo tetikasa 90 azo havaozina
Misaotra ny Canary Islands FDCAN, tetikasa 90 hanatsarana ny fitantanana angovo any amin'ireo nosy isan-karazany dia hahazo famatsiam-bola mitentina € 228 tapitrisa.
Ny fomba hafa azo atao amin'ny turbine nentin-drazana
Miaraka amin'ny fanampian'ny fandrosoana ara-teknolojia sy ny hevitry ny genius, afaka mankafy fomba hafa isoloana ny turbine mahazatra isika.
Notokanan'i Ekosy ny toeram-pambolena rivotra mitsingevana 25 km miala ny morontsiraka
Notokanan'i Ekosy ny toeram-piompiana misy rivotra mitsingevana 25 km miala ny morontsiraka, na dia turbine iray monja aza no napetraka ary 4 hafa no antenaina hapetraka.
Nikaragoa, miaraka amin'i Costa Rica sy Suède, miaraka amin'i Nikaragua, no mpitarika manerantany amin'ny famokarana herinaratra azo havaozina.
Ny Portugal rehetra dia niasa nandritra ny 4 andro tamin'ny fanavaozana. Sambany ny firenena mandroso no tsy mampiasa afa-tsy ny havaozina hatrizay.
Tesla dia mikambana hampiasa batery misy herin'ny rivotra avy amin'ny ranomasina
Tesla sy Deepwater Wind dia miara-miasa amin'ny famoronana toeram-pambolena rivotra hanomezana ny morontsiraky ny Vineyard an'i Martha ankoatry ny fitehirizana angovo avy amin'ny rivotra.
Iran dia manamafy ny fanolorantenany amin'ny angovo azo havaozina
I Iran no manana ny fahaizan'ny famokarana angovo azo havaozina lehibe indrindra any Moyen Orient, toy ny rivotra, ny geothermal, ny hydroelectric, ny solar ary ny thermal
Toetran'ny angovo azo havaozina any Espana sy ny fomba fijery ho an'ny 2020
Misy lasibatra angovo telo amin'izao fotoana izao, izay tsy maintsy raisina ho an'ny tsena eropeana amin'ny taona 2020 (ilay antsoina hoe "triple 20")
ACS mpandresy lehibe amin'ny lavanty farany azo havaozina
ACS no mpandresy amin'ny lavanty angovo azo havaozina. 1550MW ny photovoltaic no nomena. Forestalia sy Enel koa dia nahazo ny anjara mofomamy
Fanantenana farany ambony amin'ny varotra fanavaozana fahatelo
Ilay lavanty dia mitazona ny mason-tsivana mitovy amin'ny fizarana izay nitantana tamin'ny volana Mey ary toherin'ireo mpanentana photovoltaic mafy,
Zavamaniry masoandro mitsingevana
Ny zavamaniry masoandro mitsingevana dia nanomboka nivoatra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny fiatrehany dia mitovy amin'ny toeram-piompiana misy rivotra
Naharitra efa-taona mahery ny fihenan'ny rivotra tao Catalonia
Naharitra efa-taona mahery ny fanidiana ny rivotra tao Catalonia. Tamin'ny volana Janoary 2013, notokanana ilay valan-javaboary farany, ary tsy nisy na dia MW iray aza navela.
Ny roa ampahatelon'ny angovo lany tao El Hierro tamin'ny volana Jona dia azo havaozina
Ny El Hierro Hydroelectric Power Plant dia nanome 62% ny herinaratra nosy nandritra ny volana Jona, nanasongadinana ireo fotoana nahatratra 100% ny angovo.
Ny fitomboan'ny havaozina tsy azo sakanana
Ny tatitra farany natolotry ny REN21 Organisation dia mampiseho ny fitomboan'ny fanavaozana tsy azo sakanana, ny hoavin'izy ireo ankehitriny ary ny ho avy tsaratsara kokoa.
Hidina ny premiums ho an'ny havaozina hampihenana ny vidin'ny herinaratra
Hodinihin'ny governemanta ny tombom-barotra azo trandrahana azo havaozina manomboka amin'ny taona 2020, maniry ny hampidina ny premiums hampihena ny vidin'ny herinaratra hatramin'ny 10%
Ny varotra angovo azo havaozina manaraka dia amin'ny 26 Jolay
Taorian'ny fahombiazan'ny lavanty farany dia nanambara ny governemanta 3000MW hafa ny 26 Jolay, hitovy ny an'ny lalàna sy ny teo aloha.
Ahoana no nahatongavan'i Uruguay ho firenena matanjaka amin'ny angovo rivotra
Ahoana no ahafahan'ny firenena kely tsy misy solika mampihena ny vidin'ny herinaratra, mampihena ny fiankinan-doha amin'ny solika ary ho mpitarika ny angovo rivotra?
Hanana lavanty vaovao azo havaozina isika
Ny minisitry ny angovo, fizahan-tany dia nanolotra lavanty vaovao, io tolotra vaovao io dia 3.000 megawatt ary ho entin'ny rivotra sy ny angovo photovoltaic.
Inona ny nosy Dogger? Nosy artifisialy izay hiteraka angovo azo havaozina ho an'ny olona 80 tapitrisa.
Dogger Island dia tetik'asa nosy artifisialy, afaka manome angovo azo havaozina ho an'ny olona 80 tapitrisa any Eropa amin'ny 2050. Angano sa siansa marina?
Angovo vidin'ny bargain any Angletera noho ny rivotra mahery
Noho ny rivotra avy any amin'ny toeram-piompiana rivotra any ivelany any London Array, ny vidin'ny angovo dia nahatratra -19,25 pounds per MWh ary nijanona ho ratsy nandritra ny 5 ora.
Miverina ny governemanta handray tombony amin'ny herin'ny rivotra amin'ny lavanty manaraka
Ny minisiteran'ny angovo dia nandefa ny drafitra CNMC handrindrana ny varotra 3GW azo havaozina, manantena fa hakatona tsy misy vidiny amin'ny rafitra.
Tantaran'ny angovo avy amin'ny rivotra
Hatramin'ny andro taloha, ny olona dia nampiasa ny rivotra tamin'ny hetsika maro. Ny tantaran'ny angovo rivotra dia feno an-dàlana, ahoana no niovany?
Ny fanovana tsy mampino an'i Forestalia
Nitresaka indray i Forestalia tamin'ny varotra fanavaozana izay notontosain'ny governemanta tamin'ny volana Mey lasa teo, nahazo 1.200 megawatt (MW) tamin'ny 3.000 natolotra.
Ny fanatsarana ny angovo azo havaozina any Espana
Hatramin'ny faran'ny taona 2011, nisy andiam-pitsipika maromaro nankatoavina izay nisy fiantraikany tanteraka tamin'ny fampandrosoana ny angovo azo havaozina tany Espana.
Ny loharanom-baovao azo havaozina dia lasa lamaody amin'ny orinasa lehibe maro
Mihamaro ny orinasa miloka amin'ny fahazoana ny angovo ilainy amin'ny loharano azo havaozina. Iberdrola dia manome angovo ho an'i Apple, Amazon, Nike ankoatry ny hafa
Manambara varotra lavitr'ezaka vaovao azo havaozina ho an'ny 3.000 MW i Rajoy
Mariano Rajoy dia nanambara fa nanomboka ny fombafomba hamoahana lavanty vaovao ny angovo azo havaozina ho an'ny 3.000 megawatt (MW) izy
Ahoana ny fitateranao ireo lelam-bolam-bolan'ny 52 metatra
Hitanay ny odyssey amin'ny fitaterana ny tadin'ny turbin-drivotra, na amin'ny ranomasina na amin'ny tanety (kamio sy lamasinina). Ny fiompiana rivotra lehibe indrindra eto an-tany
Ahoana ny fiasan'ny turbinina na ny rivotra?
Angovo avy amin'ny rivotra dia angovo manana ny loharano avy amin'ny rivotra. Ny fomba hampiasana an'io angovo io dia amin'ny alàlan'ny milina fitotoana rivotra na turbines-drivotra.
Forestalia mamafa ny lavanty azo havaozina
Ny herin'ny rivotra dia nifatratra tamin'ny lavanty, ny mpandresy rehetra dia nanolotra fihenam-bidy farany ambony. Enel (500MW) Gas Natural (650MW), Gamesa (206MW) ary Forestalia (1200MW)
Ny fiompiana rivotra lehibe indrindra eto an-tany
Ny toeram-piompiana rivotra lehibe indrindra dia any Etazonia. Fambolena rivotra lehibe indrindra eto an-tany. Valan-tany, zaridaina an-dranomasina. Ny hoavin'ny rivotra
Ny tanàna misy herinaratra mora vidy indrindra any Espana dia Muras
Muras, misy mponina 668, dia manana turbinina miisa 381, mamatsy ara-bola ny volan'ny mpifanila vodirindrina aminy miaraka amin'ny hetra aloany amin'i Acciona sy Iberdrola.
Ireo firenena izay mamokatra angovo be indrindra amin'ny rivotra amin'izao fotoana izao
Ireo firenena manana famokarana angovo avo indrindra eto an-tany, iza no tena mpiandany aminy miloka amin'ity karazana angovo ity?